Wararka - Shirkaddu Waxay Qabanaysaa Waxbarshada iyo Tababbarka Caafimaadka Shaqada
Shirkaddu Waxay Qabataa Waxbarshada Caafimaadka iyo Tababbarka Caafimaadka
Si kor loogu qaado wacyiga shaqaalaha ee caafimaadka shaqada loona faafiyo aqoonta ku saabsan kahortaga cudurrada shaqaalaha, iyadoo la raacayo jadwalka tababarka amniga ee 2020, shirkaddu waxay billowday hal-ku-dhig caafimaad caafimaad oo leh hal-ku-dhigga “Daryeelka Caafimaadka Shaqaalaha iyo Caawinta Shiinaha Caafimaadka leh” qolka kulanka 312 subaxnimadii 9-kii Diseembar. Xubnaha guddiga amniga shirkadda, xubnaha xafiiska badbaadada, kaadir hoggaamineed heerka dhexe, agaasimayaasha xafiiska, qaabilayaasha dhibbanayaasha iyo qaar ka mid ah shaqaalaha cusub ayaa ka qayb galay tababarka.
Shirkaddan tababarka waxay ka casuuntay macallin Ling Yujing Saldhigga Sichuan ee Xarunta Badbaadada iyo Caafimaadka si ay ugu bixiso cashar goobta ku yaal. Intii tababarku socday, Macallin Ling wuxuu adeegsaday tiro badan oo sawirro ah, kiisas dhab ah iyo fiidiyowyo si uu si cad oo muuqata ugu wacdiyo nuxurka saddex dhinac: Marka hore, aqoonta gurmadka degdegga ah, oo ay ku jiraan aqoonta dib-u-nooleynta wadnaha iyo wadnaha ee dhiigga maskaxda ku dhaca (cerebral hemorrhage) istaroog), iyo suuxdin. Hababka gargaarka degdegga ah ee cudurrada, infarction myocardial, hababka hemostasis ee caadiga ah iyo hababka gargaarka degdegga ah ee Heimlich; tan labaadna waa soo bandhigida qaab nololeed caafimaad qaba, oo ay ku jiraan cunto macquul ah, jimicsi habboon, xadididda sigaar cabista iyo aalkolada, isu dheelitirka nafsiyan, hurdo ku filan, iwm. Midda saddexaad waa in la sharraxo ka hortagga iyo hagaajinta cudurrada joogtada ah ee shaqooyinka, oo ay ka mid yihiin ka hortagga iyo daaweynta dhiig-karka, garabka barafoobay, qanjirka ilmo-galeenka, iwm. Goobta tababarka, Macallin Ling Yujing waxay si firfircoon ula macaamishay ardayda oo ay sameysay mudaaharaad toos ah, oo qof walba uu ka helay jawaab kulul. Waxbarashada caafimaadka shaqaalaynta ah ee hal iyo badhka ah ayaa qani ku ah maadada, oo leh sawiro iyo qoraalo hodan ah, goobta wax lagu barto waxay samaysaa taah naxdin leh iyo jawaabaha su'aalaha mararka qaarkood. Tababarkan, kaliya maahan aqoonta caafimaadka shaqada ee tababartayaasha, laakiin sidoo kale qof kastaa wuxuu gartay inay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhibaatooyinka caafimaad ee ay leeyihiin ayna ilaaliyaan "caasimada kacaanka".
In la abuuro jawi shaqo oo caafimaad qaba, aamin ah, iswaafajin kara oo waara, iyo ilaalinta caafimaadka shaqaalaha waa mas'uuliyadda bulshada ee shirkadda. Waxbarista iyo tababbarka caafimaadka shaqada ee shirkaddu waxay door wanaagsan ka ciyaareen kobcinta wacyiga shaqaalaha ee is-ilaalinta, hubinta caafimaadkooda jireed iyo maskaxeed, iyo si wax ku ool ah looga hortago cudurrada shaqada.
Waqtiga dhejinta: May-01-2020
Saamaynta Hoolka Saamaynta Hadda, Hall Sensor hadda, Isticmaalka Awoodda Hoose Dc Sensor-ka Haatan, Hall Saamaynta Ac Sensor-ka Hadda, Danab Sensor hadda, Xaqiijinta Sare Ac sensor Sensor,